I-Litecoin iyini futhi ungayithenga kanjani ukuthenga i-Litecoin? Konke mayelana ne-LTC | Izindaba zamagajethi
Iyini i-Litecoin nokuthi ungayithenga kanjani i-Litecoin?
UMiguel Gaton | | Criptomonedas, General
I-Litecoin iyinhlobo yemali yedijithali ekhomba iphuzu (P2P) esekwe kwisoftware evulekile futhi efike emakethe ngonyaka we-2011 njengomphelelisi weBitcoin. Kancane kancane iba yi-cryptocurrency engaziwa esetshenziswa abasebenzisi abaningi ngokwengeziwe, ikakhulukazi ngenxa yobulula obungavela kulezi zinhlobo zezimali, eziphansi kakhulu kunalezo zeBitcoin.
Yize uma sikhuluma Izimali zedijithali noma ama-cryptocurrensets khona manje Ama-Bitcoins afika engqondweni. Kepha akusiyona yodwa etholakale emakethe, kude nayo, iminyaka embalwa, Ethereum isibe enye indlela ebucayi kuneBitcoinYize uma sizisekela kunani lalezimali ngayinye, kusese nendlela ende okufanele yenziwe ukuze kube enye indlela yangempela yeBitcoin, imali esibe yindlela yokukhokha kwezinye zezinkampani ezinkulu ezifana neMicrosoft, iSteam , Expedia, Dell, PayPal ukusho izibonelo ezimbalwa.
Ufuna tshala imali kuLitecoin? Kulungile thola i- $ 10 MAHHALA ku-Litecoin ngokuchofoza lapha
Kulesi sihloko sizokukhombisa konke odinga ukukwazi ngeLitecoin, ukuthi kuyini, kusebenza kanjani nokuthi ungayithenga kuphi.
1 Kuyini iLitecoin
2 Umehluko phakathi kweLitecoin neBitcoin
3 Ngubani owadala uLitecoin
4 Ngiwathola kanjani amaLitecoins
5 Izinzuzo nobubi beLitecoin
6 Ungathenga kanjani ama-Litecoins
I-Litecoin, njengezinye izimali zedijithali, iyi-cryptocurrency engaziwa eyadalwa ngonyaka we-2011 njengenye ye-Bitcoin, ngokususelwa kunethiwekhi ye-P2P, ngakho-ke nganoma yisiphi isikhathi alilawulwa yinoma iliphi igunya, njengokungathi kwenzeka ngezimali ezisemthethweni zawo wonke amazwe, yingakho inani lalo lihluka ngokuya ngokufunwa. Ukungaziwa kwale mali kuvumela fihla ubunikazi ngaso sonke isikhathi labantu abenza ukuthengiselana, ngoba kwenziwa ngesikhwama se-elekthronikhi lapho kugcinwa khona zonke izimali zethu. Inkinga ngalezi zinhlobo zemali ifana njalonjalo, ngoba uma zisiphanga, asinayo indlela yokwazi ukuthi ngubani othulule isikhwama sethu semali.
I-blockchain, eyaziwa kangcono nge-blockchain, yeLitecoin iyakwazi ukuphatha inani elikhulu lokuthengiselana kuneBitcoin. Ngoba ukukhiqizwa kwamabhulokhi kuvame kakhulu, inethiwekhi isekela ukuthengiselana okuningi ngaphandle kwesidingo sokushintsha isoftware ngokuqhubekayo noma kungekudala. Ngakho-ke, abathengisi bathola izikhathi zokuqinisekisa ezisheshayo, ukugcina banekhono lokulinda ukuqinisekiswa okuningi lapho bathengisa izinto ezibiza kakhulu.
Umehluko phakathi kweLitecoin neBitcoin
Ukuba okuphuma noma imfoloko yeBitcoin, womabili ama-cryptocurrensets asebenzisa uhlelo olufanayo lokusebenza futhi umehluko omkhulu utholakala ku inani lokukhishwa kwezigidi zemali, etholakala ngeBitcoin ezigidini ezingama-21, ngenkathi umkhawulo omkhulu wamaLitecoins yizigidi ezingama-84, Izikhathi ezine ngaphezulu. Okunye umehluko kutholakala ekuthandweni kwezimali zombili, kuyilapho iBitcoin yaziwa kabanzi, iLitecoin kancane kancane yenza isifaca kule makethe yezimali ezibonakalayo.
Thola i- $ 10 MAHHALA ku-Litecoin ngokuchofoza lapha
Omunye umehluko esiwutholayo uma kukhulunywa ngokuthola imali ebonakalayo. Ngenkathi izimayini zeBitcoin zisebenzisa i-SH-256 algorithm, okuyi kudinga ukusetshenziswa kweprosesa okuphezulu kakhulu, inqubo yezimayini zeLitecoin isebenza nge-scrypt edinga inani elikhulu lememori, ishiya eceleni iprosesa.
Ngubani owadala uLitecoin
Owayesebenza kwaGoogle, uCharlie Lee, nguyena owadala ukwakhiwa kweLitecoin, ngenxa yokushoda kwezinye izindlela emakethe yemali ebonakalayo nalapho zazingakabi imali ejwayelekile yanoma yiluphi uhlobo lwemali. Ukuthengiselana. UCharlie uthembele kuBitcoin kodwa ngenhloso guqula le mali ibe yindlela yokukhokha ebingazinzile futhi ayincikile ngokweqile ezindlini zokushintshanisa, into njengoba sikwazile ukukuqinisekisa akwenzeki ngeBitcoin.
Ukuze le mali ingathinteki ngokuqagela, indlela yokuyithola ilula kakhulu futhi iyalingana, ukuze kuthi njengoba idalwa, inqubo ingabi nzima noma inciphise inani lezimali ezitholakalayo. I-Bitcoin yakhelwe ukuphatha izinhlamvu zemali ezifika ezigidini ezingama-21, ngenkathi eLitecoin kunezinhlamvu zemali eziyizigidi ezingama-84.
Ngiwathola kanjani amaLitecoins
I-Litecoin imfoloko yeBitcoin, ngakho-ke isoftware ye- qala izimayini zeBitcoins cishe kuyafana ngokuguqulwa okuncane. Njengoba ngishilo ngenhla, umvuzo wezimayini zeLexcoins unenzuzo enkulu kuneBitcoin. Njengamanje ngebhulokhi ngalinye elisha sithola ama-Litecoins angama-25, inani elehliswa ngesigamu njalo eminyakeni emi-4 cishe, inani eliphansi kakhulu kunalokho esikutholayo uma sizinikezela ekumbizeni iBitcoins.
I-Litecoin, njengawo wonke amanye ama-cryptocurrensets, iyi-software yomthombo ovulekile eshicilelwe ngaphansi kwelayisense ye-MIT / X11 esivumela ukuthi sisebenzise, ​​siguqule, sikopishe isoftware futhi siyisabalalise. Isoftware ikhishwa ngenqubo esobala evumela ukuqinisekiswa okuzimele kwama-binaries kanye nekhodi yawo yomthombo ehambisanayo. Isoftware edingekayo yokuqala izimayini zeLexcoins ingatholakala kufayela le- Ikhasi elisemthethweni leLitecoin, futhi iyatholakala ngeWindows, Mac, neLinux. Singathola futhi ikhodi yomthombo
Ukusebenza kwesicelo akunamfihlakalo, ngoba kufanele sikwenze kuphela landa uhlelo futhi uzoqala enze umsebenzi wakhe, ngaphandle kokuthi singenelele nganoma yisiphi isikhathi. Uhlelo lokusebenza ngokwalo lusinika ukufinyelela esikhwameni semali lapho kugcinwa khona wonke amaLitecoins esiwatholayo futhi lapho singathumela khona noma sithole lezi zimali ezibonakalayo futhi sithinte konke ukuthengiselana esikwenzile kuze kube manje.
Enye indlela yokumba amaLitecoins ngaphandle kokutshala imali kwikhompyutha, siyithola iSheriton, uhlelo lokumbiwa kwamafu Esingakwazi futhi ukumba ngayo iBitcoins ne-Ethereum. ISheriton isivumela ukuthi sisungule inani le-GHz esifuna ukuyabela izimayini, ukuze sikwazi ukuthenga amandla amaningi ukuthola amaLitecoins ethu noma ezinye izinhlobo zemali ngokushesha okukhulu.
Izinzuzo nobubi beLitecoin
Izinzuzo uLitecoin asinikeza zona ziyefana nathi esingazithola nazo zonke ezinye izimali ezibonakalayo, njengokuvikeleka nokungaziwa lapho senza noma yiluphi uhlobo lokuthengiselana, ukungabikho kwamakhomishini kusukela ukuthengiselana kwenziwa kusuka kumsebenzisi kuye kumsebenzisi ngaphandle kokungenelela kwanoma yimuphi umzimba olawulayo kanye nejubane, selokhu ukudluliswa kwalolu hlobo lwemali ngokushesha.
Inkinga enkulu le mali ebhekene nayo namuhla ukuthi ayidumile njengoba iBitcoin ingaba namuhla, imali cishe wonke umuntu ayaziyo. Ngenhlanhla, ngenxa yokuthandwa kwale mali, ezinye izindlela ezitholakalayo ezimakethe seziya zisetshenziswa kakhulu ngabasebenzisi, yize okwamanje zingekho ezingeni leBitcoin, imali eseziqalile izinkampani ezinkulu ukusebenzisa. sebenzisa njengendlela yokukhokha.
Ungathenga kanjani ama-Litecoins
Uma singahlose ukuqala ukumba izimayini zeLitecoins, kepha sifuna ukungena emhlabeni wezimali ezibonakalayo ezingaziwa, singakhetha thenga ama-litecoins ngeCoinbase, insiza ehamba phambili njengamanje isivumela ukuthi senze noma yiluphi uhlobo lokuthengiselana ngalolu hlobo lwemali. ICoinbase isinikeza uhlelo lokusebenza lokuthinta i-akhawunti yethu nganoma isiphi isikhathi kuzo zombili i-iOS ne-Android, uhlelo lokusebenza olusinikeza imininingwane eningiliziwe ngokushintshashintsha okungenzeka kuhlaselwe yimali.
Ngabe ufuna ukutshala imali kuLitecoin?
Chofoza LAPHA ukuthenga i-Litecoin
Ukuze uthenge le mali ebonakalayo, kufanele siqale sifake ikhadi lethu lesikweletu noma sikwenze nge-akhawunti yethu yasebhange.
Ungaphuthelwa ama- $ 10 MAHHALA ku-Bitcoin ngokuchofoza lapha!
I-Coinbase: Shintshanisa i-BTC, i-ETH, i-SHIBMahhala
I-Coinbase: Bitcoin, ETH, SHIB
Umthuthukisi: I-Coinbase Android
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ubuchwepheshe » Criptomonedas » Iyini i-Litecoin nokuthi ungayithenga kanjani i-Litecoin?
Lokhu kubukeka kanjena iMeizu M6, ifoni enhle, enhle futhi eshibhile